बलिउडको नातावाद सुशान्तको आत्महत्याको कारण हो त ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
बलिउडको नातावाद सुशान्तको आत्महत्याको कारण हो त ?
प्रकाशित मिति : २०७७, ६ असार शनिबार ०९:४३
प्राय जसो सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट देखिन्छ। फिल्म क्षेत्रमा त झन आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न अनेकन टिकडम हुने गर्छन्। यस क्षेत्रमा लागेका घरनाका आफन्तले मात्र अबसर पाएको, प्रतिभा हुँदा हुँदै पनि अरु पछि पर्नु परेको ज्वलन्त उदाहरणहरु प्रशस्त छन ।
आत्महत्याको कारण खोज्ने हो भने यसको प्रमुख कारण मानसिक रोगलाई लिने गरिन्छ । त्यसमा पनि डिप्रेसन एक नम्बरमा पर्ने गर्छ। विभिन्न कारणले गर्दा मानसिक समस्यमा परेपछि बेलैमा सहि उपचार हुन नसक्दा आत्महत्या जस्तो दु:खद घटना घटन सक्छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जनचेतनाको ठूलो आवस्यकता देखिन्छ। डिप्रेसन तथा आत्महत्याका विषयमा सत्य तथ्य जानकारी दिन सके तथा यस बिषयमा बहस र छलफल अगाडि बढाउन सके यस्ता दुःखद घटनाहरुलाई कम गर्न सकिन्छ।
ढकाल मनोविद् हुन् ।